Naag iyo Jeceyl Nin iyo Ixtiraam | Ilwareed.com Isha wararka iyo warbixinada Somalida oo dhan, iyo dhacdooyinka caalamka
Naag iyo Jeceyl Nin iyo Ixtiraam
Posted By ilwareed on Thursday, December 6th 2012 02:43 EAT
Ka dhig ninkaada Hogaamiyaha guriga:
In aadan hoos u dhigin lamaanahaaga:
Umul Mu’miniin, Khadiijah aad ayay u garab istaagtay oo u taageertay nabigeena AWC oo ay soo food saareen dhibaatooyin aad u culus markuu Makah joogay. Geerideedana Nabigeena aad ayuu ugu murgooday, mana iloobaynin inuu sheego waxyaabihii ay u qabatay. Ragga sidoodaba waxay u kala dheereeyaan siday u kala naago fiican yihiin siday Soomaalidu ku maahmaahdo “Rag naagaa is dhaafshay”. Ninka qaba naagta hufan oo xil kasta ah wuxuu dheereeyaa raga kale. Dabcan, sidoo kale haweenayda nin hufan qabta waa ka dheereysaa haweenka kale, kalsoonideedana waa sareysaa
Fadlan walaalayaal, hadii maqaalkani aan ku sheegay wax khalad ogow wuxuu ka yimid nafsadayda daciifka ah iyo sheydaanka, wixii fiicana waa ilaahay xagii, mahad weyna asagaa iska leh. Waxaan kaloo idiinka codsanaayo inaad ducadiina iga iloobina.